Iphakheji Esekwe Ephepheni Ishintshwe Abathengi Ngezimfanelo zayo Zezemvelo | IHaishu
Imiphumela yenhlolovo entsha yase-Europe iveza ukuthi ukufakwa okusekwe ephepheni kuyathandwa ngokuba ngcono emvelweni, njengoba abathengi beya ngokuya bekhumbula ukukhetha kwabo okupakayo.
Ucwaningo lwabathengi base-Europe abangama-5 900, olwenziwe umkhankaso wezimboni i-Two Side nenkampani ezimele yocwaningo iToluna, belufuna ukuqonda izintandokazi zabathengi, imibono, kanye nezimo zokupakishwa.
Abaphendulile bacelwe ukuthi bakhethe izinto zabo abazithandayo zokufaka (iphepha / amakhadibhodi, ingilazi, insimbi neplastiki) ngokusetshenziselwa izimfanelo eziyi-15 zezemvelo, ezisebenzayo nezibonakalayo.
Phakathi kwezimpawu eziyi-10 zokufakelwa iphepha / amakhadibhodi ethandwayo, u-63% wabathengi uyikhetha ukuthi ibe ngcono imvelo, i-57% ngoba kulula ukuyiphinda isetshenziswe futhi abangama-72% bancamela iphepha / amakhadibhodi ngoba liyikhaya.
Ukufakwa kweglasi kungukhetho olukhethiweyo lwabathengi ngokunikeza ukuvikelwa okungcono kwemikhiqizo (i-51%), futhi ukwenziwa kabusha (55%) no-41% bakhetha ukubukeka nokuzizwa kwengilazi.
Izimo zabathengi ekufakweni kwepulasitiki zicacile, ngama-70% abaphendulile athi bathatha izinyathelo eziqinile zokunciphisa ukusetshenziswa kwabo kokupakishwa kwepulasitiki. Ukufakwa kwepulasitiki nakho kuthathwa ngokunembile njengokuthile okuphinde kusetshenziswe kabusha, ngabathengi abangama-63% bakholelwa ukuthi izinga lokuphinda lisebenze kabusha elingaphansi kwama-40% (42% wokufakwa kwepulasitiki liphinde lakhiwa kabusha eYurophu1).
Inhlolovo ithole ukuthi abathengi kulo lonke elaseYurophu bazimisele ukushintsha indlela abaziphatha ngayo ukuze bathenge ngokuzinzile. Abangu-44% bazimisele ukusebenzisa okuningi emikhiqizweni uma kufakelwe izinto ezingagcineki futhi cishe isigamu (48%) bangacabanga ukugwema abathengisi uma bekholelwa ukuthi abathengisi abenzi ngokwanele ukwehlisa ukusetshenziswa kwawo kokupakishwa okungaphindeki.
UJonathan uyaqhubeka, “Abathengi sebeyazi ngokwengeziwe izinqumo zokupakisha zezinto abazithengayo, okuthi nokusebenzisa ingcindezi emabhizinisini - ikakhulukazi ezitolo. Isiko le'yenza, sebenzisa, chitha' ushintsha kancane.”